” ရေမွန်၄လပြည့် မှာစစ်တပ်အားပေးတွေနဲ့မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့ဆုံမိခဲ့ပြီး အလှူတွေပါလုပ်ခဲ့မိတာကြောင့် တော်လှန်ရေးလုပ်ရင်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ သားဖြစ်သူ ရေမွန်အပေါ် အားနာစိတ်ဖြစ်မိနေတဲ့ ခင်မြတ်မွန်” – myannewsmedia.com
” ရေမွန်၄လပြည့် မှာစစ်တပ်အားပေးတွေနဲ့မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့ဆုံမိခဲ့ပြီး အလှူတွေပါလုပ်ခဲ့မိတာကြောင့် တော်လှန်ရေးလုပ်ရင်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ သားဖြစ်သူ ရေမွန်အပေါ် အားနာစိတ်ဖြစ်မိနေတဲ့ ခင်မြတ်မွန်”
November 15, 2021 November 15, 2021 - by sweety - LeaveaComment
CeleChitThu ပရိသတ္ႀကီးေရ ခင္ျမတ္မြန္ကေတာ့ ေရမြန္ရဲ႕မိခင္ ျဖစ္ၿပီးဂီတေလာကမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ပံ့ပိုးသင္ျပေပးေနတဲ့ ဂီတေလာကဆရာမတစ္ဦးပါ။ ေရမြန္ဆုံးပါးသြားမႈေၾကာင့္ အခူခ်ိန္ထိေျဖမဆည္ႏိုင္ေအာင္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲလ်က္ရွိဆဲပါေနာ္။
ဒီေန႔မွာေတာ့ ”ေျမာက္ပိုင္းသားေတြပလူပ်ံေနတဲ့ေနရာမွာ ဆရာနဲ႔ဆရာမတို႔ကိုကန္ေတာ့ဖို႔ဖိတ္လို႔ ဘုမသိဘမသိနဲ႔သြားခဲ့၊လႉခဲ့တာေတြေနာင္တရလိုက္တာ.ပိုၿပီးေနာင္တရေစတာက..အဲ့ဒီေန႔ဟာတြတ္ပီအသက္ေပးသြားတာ(၄)လတင္းတင္းျပည့္တဲ့ေန႔ !!!တြတ္ပီအတြက္ရည္စူးၿပီးေတာင္သားအမိ၂ေယာက္လႉခဲ့ေသးတယ္..”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ေရမြန္ ၄လ ျပည့္မွာ စစ္တပ္ကိုအားေပးတဲ့ တပည့္ေတြနဲ႔သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့မိတာကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင္တန္ေဆာင္တိုင္မွာ စစ္တပ္ကဖိတ္ေခၚမႈကိုလက္ခံၿပီးသီဆိုေဖ်ည္ေျဖမယ့္သူေတြထဲမွာ သူမရဲ႕တပည့္အရင္းေတြပါေနတာေၾကာင့္ ယူႀကဳံးမရ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂီတေလာကရဲ႕ ျမန္မာသံဂီတမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြလည္း တန္ေဆာင္တိုင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမွာ ပါဝင္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ မသိဘဲစစ္တပ္အားေပးေတြနဲ႔ေတြ႕ဆုံခဲ့မိတာေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရင္း အသက္ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ သားျဖစ္သူ ေရမြန္အေပၚ အားနာစိတ္ျဖစ္မိေနတဲ့ ခင္ျမတ္မြန္အတြက္အားေပး​စကားေျပခဲ့ပါဦးCeleChitThu ပရိသတ္ႀကီးေရ။
Source: KhinMyat Mon
” ရေမွန်၄လပြည့် မှာစစ်တပ်အားပေးတွေနဲ့မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့ဆုံမိခဲ့ပြီး အလှူတွေပါလုပ်ခဲ့မိတာကြောင့် တော်လှန်ရေးလုပ်ရင်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ သားဖြစ်သူ ရေမွန်အပေါ် အားနာစိတ်ဖြစ်မိနေတဲ့ ခင်မြတ်မွန်”
CeleChitThu ပရိသတ်ကြီးရေ ခင်မြတ်မွန်ကတော့ ရေမွန်ရဲ့မိခင် ဖြစ်ပြီးဂီတလောကမျိုးဆက်သစ်တွေကို ပံ့ပိုးသင်ပြပေးနေတဲ့ ဂီတလောကဆရာမတစ်ဦးပါ။ ရေမွန်ဆုံးပါးသွားမှုကြောင့် အခူချိန်ထိဖြေမဆည်နိုင်အောင်ဝမ်းနည်းကြေကွဲလျက်ရှိဆဲပါနော်။
ဒီနေ့မှာတော့ ”မြောက်ပိုင်းသားတွေပလူပျံနေတဲ့နေရာမှာ ဆရာနဲ့ဆရာမတို့ကိုကန်တော့ဖို့ဖိတ်လို့ ဘုမသိဘမသိနဲ့သွားခဲ့၊လှူခဲ့တာတွေနောင်တရလိုက်တာ.ပိုပြီးနောင်တရစေတာက..အဲ့ဒီနေ့ဟာတွတ်ပီအသက်ပေးသွားတာ(၄)လတင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့ !!!
တွတ်ပီအတွက်ရည်စူးပြီးတောင်သားအမိ၂ယောက်လှူခဲ့သေးတယ်..”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ရေမွန် ၄လ ပြည့်မှာ စစ်တပ်ကိုအားပေးတဲ့ တပည့်တွေနဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့မိတာကို ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင်တန်ဆောင်တိုင်မှာ စစ်တပ်ကဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံပြီးသီဆိုဖျေည်ဖြေမယ့်သူတွေထဲမှာ သူမရဲ့တပည့်အရင်းတွေပါနေတာကြောင့် ယူကြုံးမရ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂီတလောကရဲ့ မြန်မာသံဂီတမျိုးဆက်သစ်တွေလည်း တန်ဆောင်တိုင်ဖျော်ဖြေမှုမှာ ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ မသိဘဲစစ်တပ်အားပေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မိတာကြောင့် တော်လှန်ရေးလုပ်ရင်း အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ သားဖြစ်သူ ရေမွန်အပေါ် အားနာစိတ်ဖြစ်မိနေတဲ့ ခင်မြတ်မွန်အတွက်အားပေး​စကားပြေခဲ့ပါဦးCeleChitThu ပရိသတ်ကြီးရေ။
Previous Article “သူမရဲ႕ HD ေတြၾကည့္ဖူးတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုအပုပ္ခ်လာသူကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ယုံၾကည္မႈရွိရွိနဲ႔ တန္ျပန္ ေျပာဆို ေျဖရွင္းလိုက္တဲ့ ဆုအိမ္စံ”
Next Article “စစ်တပ်အားပေးမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့ ယဉ်လက်ရဲ့နေအိမ်မှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့”